स्ट्रेचर अभावः काठमा कपडा बेरेर सुत्केरी बोक्न बाध्य छन् च्वाँगढवासी – इन्सेक
स्ट्रेचर अभावः काठमा कपडा बेरेर सुत्केरी बोक्न बाध्य छन् च्वाँगढवासी
बैतडी ०७६ साउन २५ गते
सुत्केरी बोक्न स्ट्रेचर नहुँदा जिल्लाको (च्वाँगढ क्षेत्र) को सिगास गाउँपालिकाका स्थानीयवासी काठमा कपडा बेरेर सुत्केरी बोक्न बाध्य छन् ।
सिगास गाउँपालिका–७ बोरीगाउँकी सरस्वती बोहरालाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि स्ट्रेचर नहुँदा आफन्तले सालको काठमा कपडा बेरेर बोक्दै बझाङ जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएका छन् ।
काठमा कपडा बेरेर झरीमा भिज्दै सुत्केरी बोक्नु पर्दा निकै दुःख भएको सुत्केरीका आफन्त अर्जुन बोहराले गुनासो गरे ।
उनले भने–“भूगोलले नै ठगिएका हामी जस्ता दुर्गम च्वाँगढवासीका पीडा गाउँघरको सरकारले पनि सुनेन । बजेट आउँछ भन्छन् । खै आएको बजेट ? बजेट कता जान्छ थाहा छैन । हाम्रो दुःख जस्ताको तस्तै !”
सुत्केरी गराउन आफ्नै गाउँपालिकाको शिवलिङ्ग स्वास्थ्य चौकी पुग्न ६ घण्टा र न्वाघर बर्थिङ सेन्टर पुग्न ३ घण्टा लाग्ने भएकोले त्यो भन्दा २ घण्टा उकालो हिँडेर बझाङको देउरा हुँदै जिल्ला अस्पताल बझाङ् पुर्‍याएर सुत्केरी भएको महिलाका आफन्त अर्जुन बोहराले बताए । बझाङ जिल्ला अस्पताल पुगेर सरस्वती बोहराले छोरीको जन्म दिइन् ।
जिल्लाको पूर्वी च्वाँगढ क्षेत्रमा पर्ने सिगास गाउँपालिकामा करिब ३० हजार जनसङ्ख्या छ । यहाँ ६ ओटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामासमेत स्ट्रेचर छैनन् । भएका स्ट्रेचर पनि खिया लागेर भाँचिएका छन् ।
यसअघि सिगास गाउँपालिका–४ गड्तोलाकी गीता साउदलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल पुर्‍याउन स्वास्थ्य संस्थाको खिया लागेको स्ट्रेचरमा बोक्दा आधा बाटो नपुग्दै स्ट्रेचर भाँचिएको थियो ।
आधा बाटोमा पुगेर स्ट्रेचर भाँचिएपछि सुत्केरीका आफन्तले काठमा कम्बल बेरेर अस्पताल लैजानु परेको सुत्केरीका नातेदार राजेन्द्र साउदले बताए ।
च्वाँगढ क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न बाटो समेत असजिलो छ । त्यसमाथि काठमा कपडा बेरेर ज्यान जोखिममा पार्दै सुत्केरी र अन्य बिरामीलाई बोकेर साँघुरो बाटोमा हिँड्नु परेको पीडा च्वाँगढवासीले झेल्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य सुत्केरी गराउन विभिन्न मिडियामा विज्ञापन दिएर ठूलो धनराशी खर्च गरे पनि सुत्केरी बोक्न स्ट्रेचर नकिनेको स्थानीयको आरोप छ ।
सडकनै नपुगेको सिगास गाउँपालिकामा जन प्रतिनिधिहरूले गाडी बुकिङ र तेल खर्च भनेर सात लाख रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
तर, सुत्केरी र बिरामीलाई तत्काल अस्पताल लैजान स्ट्रेचर नहुँदा समस्या भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै नभएर प्रत्येक गाउँ टोलमा एउटा स्ट्रेचर राख्नु पर्ने विषयमा गाउँपालिकामा कुरा राखेको सिगास गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जनकसिंह धामीले बताए ।
संयोजक धामीले भने–‘स्ट्रेचरको निकै समस्या छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नु पर्ने कुरा मैले पटकपटक भन्दै आइरहेको छु ।’
सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले स्ट्रेचर किन्ने सोच बनाएको बताए । अध्यक्ष धामीले भने–‘स्ट्रेचर महङ्गो नै पर्छ । यो वर्ष स्वास्थ्यमा ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । के के किन्न सकिन्छ ? छलफल गर्छौँ । तर, स्ट्रेचर किन्छौँ ।’
बैतडीमा एक जिल्ला असप्ताल, दुई ओटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ६४ ओटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । कुल १० स्थानीय तह रहेको बैतडी जिल्लाको स्वास्थ्य सूचाङ्कमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनुअघि देशभरीमै तेश्रो स्थानमा थियो ।
पुनःसंरचनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि गत वर्ष सूचाङ्कको समीक्षा नभएको स्वास्थ्य कार्यलय बैतडीकी प्रमुख निशा जोशीले बताइन् ।
स्वास्थ्य सूचाङ्कको बारेमा समीक्षा नभए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याका बारेमा जनप्रतिनिधि जानकार नहुँदा बैतडीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको प्रमुख जोशीको भनाई छ ।